🥇 ▷ Panasonic wuxuu soo bandhigayaa TV leh laba lakab LCD iyo mid kale oo hufan ✅
Panasonic wuxuu soo bandhigayaa TV leh laba lakab LCD iyo mid kale oo hufan
Maaddaama moodooyinkooda cusub ee OLED 2019 ay durba suuqa ka heli karaan, Panasonic waxay ka faa’iideysatay IFA si ay noogu tusto labo nooc oo telefishanno ah. Dhanka kale waxaan leenahay Moodh adeegsanaya laba lakab oo LCD ah si loo gaaro heerar madow iyo dhalaal u dhow kan TV-ga OLED. Dhanka kale, waa ay muujiyeen hufan OLED Taasi waxay umuuqataa bandhig muraayad ah. Labadaba waxaa lagu arki karaa qolka Panasonic laakiin, sida aan horayba u soo sheegnay, kuwanu waa tusaalooyin kaliya. Si kastaba ha noqotee, kuwanu waxay ina tusayaan halka hal abuurka tikniyoolajiyadeed ee mid ka mid ah soosaarayaasha ugu muhiimsan uu ku sii jeedo.
MegaCon, TV-ga labanlaab
The MegaCon waa shaashad shaashad leh oo leh ‘LCD panel double’. Maxay tahay sababta aan ugu baahanahay laba gole LCD? Sida laga soo xigtay Panasonic, nidaamkani wuxuu gaaraa heerar sare oo ah saxnaanta midabka, madow madow oo ka soo horjeeda kuwa TV-ga OLED iyo heer sare oo dhalaalaya.
Telefishanka wuxuu ka kooban yahay guddi bannaanka ah oo leh xalka 4K iyo gudi gudaha ah oo u shaqeeya hagaajinta tooska tooska ah ee Nalalka. Tani waxay ku guuleysataa qiimeyn wanaagsan oo pixel ah iyo saamiga isbarbardhiga ah ee 1,000,000: 1, oo ah wax laga heli karo moodooyinka OLED oo keliya. Marka la eego dhalaalaya, waxay joogteyn kartaa aag dhan 1,000 nits si aan rasmi aheyn, iyada oo dabooleysa 99% heerka midabka DCI P3.
Intaa waxaa dheer, moodada Panasonic waxay bixisaa a xagal ballaadhan oo fiirsasho iyadoon wax khasaare ah oo daacadda ah midabkiisu lumin. Waxay sidoo kale baabi’ineysaa cilad kasta oo is barbar-socota oo ka dhaxaysa labada guddi iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad gaar ah oo ay soo saartay Panasonic.
Transcript OLED TV
Oo ay weheliso MegaCon, Panasonic sidoo kale waxay muujisay a daahfurnaan OLED bandhigay. Iyada oo leh naqshad la mid ah tii muraayadda, waxay ku leedahay meel alwaax laga sameeyey oo ku wareegsan oo taageerta waxa u muuqda gudi muraayad ah.
Naqshadani waxay u oggolaaneysaa shaashadda inay si dabiici ah ugu dhex gasho qurxinta guriga. Si kastaba ha noqotee, daqiiqaddii aaladda la shubay, waxaa loo beddelay TV ‘OLED TV’ oo leh, sida laga soo xigtay Panasonic, tayada sawir aad u wanaagsan.
Furfurnaanta OLED waa natiijada mashruuca cilmi-baarista ee fikradda ah oo ay sameeyeen Panasonic iyo Vitra. In kasta oo Panasonic ay bixisay tikniyoolajiyaddii loo baahnaa, ayay Vitra waxay ku biirisay khibradeeda ku aaddan qalabka guryaha iyo naqshada. Qaybaha tikniyoolajiyadda ah ee shaashadda ayaa ah ku qarsoon gudaha geedka alwaax, kaas oo sidoo kale u adeegiya sidii qalab loogu talagalay aaladda. Qaybta laydhka, ee kobcisa aragtida iyo waaya-aragnimada bey’ada, ayaa sidoo kale si toos ah oo taxadar leh looga dhex helaa qaab dhismeedka.
Habka filim sameeyaha, qaabka TV-ga oo muujinaya sawirrada sida ay u abuureen hal-abuurayaashu
Dhowr bilood ka hor, qaar ka mid ah agaasimayaasha iyo xitaa jilayaasha Hollywood ayaa bilaabay “dagaal” ka dhan ah nidaamyada sawirka oo ay ku jiraan telefishannada badankood. Marka loo eego kuwa mas’uulka ka ah waxsoosaarka ugu weyn ee filimka ah, kuwan ayaan kuu oggolaaneyn inaad ku raaxeyso waxyaabaha uu ka kooban yahay maareeyuhu.
Isaga oo aan keligiis joogin digniin la siinayo soosaarayaasha, maalmo ka hor qaar ka mid ah wajiyada ugu caansan Hollywood ayaa soo bandhigay Xaaladda Filmsameeyaha. Waxay ku saabsan tahay hab gaar ah oo telefishannada ah oo curyaamiya miirayaasha qaar si muuqaalku u sii jiro sidii uu agaasimuhu uraystay. Tusaale ahaan, waxay yareyneysaa macaanka sawirada waxayna baabi’ineysaa mowjadaha, codka yareynta iyo dib udhiska, iyo kuwa kale.
Muuqaalka Filimku wuxuu leeyahay taageerada agaasimayaasha oo muhiim u ah Christopher Nolan, Rian Johnson, Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese ama James Cameron. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa soo-saareyaasha iyagu ku qasbaya inay ku soo daraan qalabkooda. Y Panasonic waxay kamid ahayd kuwii ugu horreeyay ee shaaciyey inay ku dari doonaan qaar ka mid ah telefishanadooda laga bilaabo 2020. Waxa aynaan ogayn ayaa ah in laga heli doono oo kaliya moodallo cusub ama sidoo kale kuwa horay suuqa ugu jiray.
Warar kale oo ku saabsan… OLED, Panasonic